Agba Krismas site na Ọnụ Ọgụgụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Agba Krismas site na Ọnụ Ọgụgụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na nchịkwa | Nọvemba 20, 2021
🤶🎅⛄️❄️🎄 Ị na-atụ anya ekeresimesi ngwa ngwa? 🔥👏Aha, daalụ! Ị chọtala egwuregwu ekeresimesi ziri ezi! Egwuregwu agba agba ekeresimesi pụrụ iche, agba obi ụtọ site na nọmba nọ ebe a!! Emebere egwuregwu agba ekeresimesi ka ọ mee ka ị nụ ụtọ ekeresimesi ọñụ. Anyị kpebisiri ike inye gị mmụọ omenka na-atụghị anya ya!! Ị nwere ike budata ya ugbu a ka ịhụ ka egwuregwu agba agba ekeresimesi si dị egwu!
🤶🎅⛄️❄️🎄Nnọọ ka ị nụ ụtọ agba ekeresimesi na-ewu ewu ebe a! Anyị na-enye gị foto ekeresimesi magburu onwe ya, agba obi ụtọ site na nọmba, ị nwere ike hapụ talent nke onye na-ese ihe na uche gị! Egwuregwu agba ụtọ, na ekeresimesi añụrị kwa ụbọchị!!
🤶🎅⛄️❄️🎄ozi ọma!! A ga-emelite foto efu n'efu kwa ụbọchị 🔥! Kwuo nke ọma na-agwụ ike, ọtụtụ ụdị ọkụ ka ịhọrọ, dị ka Santa Claus🤶🎅, Osisi ekeresimesi 🎄, snow ❄️, onyinye ekeresimesi ọkụ na kaadị, siri Christmas mma…were gabazie. Foto zuru oke iji tee site na nọmba oge ọ bụla & ebe ọ bụla.
🤶🎅⛄️❄️🎄 Foto ekeresimesi mara mma na nke mara mma bụ ndị ihe osise ama ama mepụtara., ị nwere ike nweta oriri na-ahụ anya zuru oke! Na-atụ anya na ị nwere ike ịnụ ụtọ ikuku ekeresimesi mgbe niile, ma nweta ahụmịhe agba agba na-egbuke egbuke!! Ọ dị mma? Budata egwuregwu agba anyị wee malite ịse nọmba ugbu a!
Lee anya! Njirimara pụrụiche agba ekeresimesi🔥:
🎨Bido ngwa ngwa egwuregwu agba, agba site na nọmba — enweghị pensụl, akwụkwọ mkpa
🤶 Mezue ọmarịcha ihe osise ekeresimesi gị nke ọma
🔥 Foto ọhụrụ efu na-emelite kwa ụbọchị, nke a na-eme site n'aka ndị na-ese ihe na-ewu ewu
⛄️ Ọtụtụ isiokwu ekeresimesi mara mma, sụ daalụ na-agwụ ike
🎅 Kekọrịta ndị enyi gị na netwọk mmekọrịta
🤶🎅⛄️❄️🎄Ị chetara atụmatụ agba anyị niile? Soro anyị ugbu a wee sonye na egwuregwu agba ekeresimesi ọnụ! Ka anyị kporie ndụ ka egwuregwu agba agba ga-adị mma ma buru ekeresimesi tupu oge eruo! Ịsọ mmiri na ụwa agba agba Krismas anyị na-adọrọ mmasị, na-enyocha ọṅụ na-atọ ọchị nke egwuregwu agba, na ichefu nchegbu nke ndụ gị ozugbo!
🤩🙌💪🏼Ala azụ, anyị na-eche gị～Ị bụ naanị onye fọdụrụ, zuru ike na ụwa agba ugbu a!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Christmas, numbers, Paint
← Ihe nkiri 456 – Egwuregwu squid&Mbanye anataghị ikike Agba ọsọ owuwe ihe ubi! – 3D Farm Race Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →